သင့်ကလေးသည် ရုပ်မြင်သံကြားကို တစ်နေကုန် ထိုင်ကြည့် သူဖြစ်နေပါက - Hello Sayarwon
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 23/07/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေး ၁၀ ယောက်မှ ၁ယောက်သည်သာ နေ့စဉ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု လုံလောက်စွာ ရှိသည်ဟု လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုအရ ဆိုသည်။ ကျန်သော ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ကလေးမှာ ရုပ်မြင်သံကြားကို တစ်နေကုန်ထိုင်ကြည့်သူများ ဖြစ်သည်။ ပျင်းရိသော နေထိုင်မှုရှိသော ကလေးများသည် အရွယ်ရောက်လာသောအခါ အဝလွန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်တက်သည်။
ထို့ကြောင့် သင့်ကလေးသည် ရုပ်မြင်သံကြားကို တစ်နေကုန်ထိုင်ကြည့်သူဖြစ်လာပါက သင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ကလေးများကို ရုပ်မြင်သံကြား တစ်နေကုန် ထိုင်ကြည့် သူများ ဖြစ်လာစေသော အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုး ရှိသည်။
ကလေးများသည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော၊ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လိုသောစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကြောင့် သူတို့သည် သူတို့ဘာသာသူတို့ အခြားဝါသနာ များကို ရှာဖွေကြသည်။ အချို့သည် စာလုပ်ရာတွင် အရမ်းစိတ်ပါလာပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရန် အပြင်သို့ပင် မထွက်ချင်ကြပါ။
အားကစားတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ပိုပြီးရွေးချယ်မှု လုပ်လာသောအခါ ဖြစ်သည်။ ကလေးများသည် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသောကြောင့် ငြင်းပယ်ခံရခြင်းများ ခံစားရနိုင် သည်။ ၎င်းကြောင့် ကလေးများ၏ အားကစားတွင် ပါဝင်လိုမှု တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားသည်။
အားကစားလုပ်ရန် လိုအပ်သောအရာများ၏ ကုန်ကျ စရိတ်သည် မြင့်မားလာသည်။ ၎င်းသည် ကလေးများ ၏ အားကစားတွင် ပါဝင်မှုကို ဟန့်တားသော အရာ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
ရုပ်မြင်သံကြားကို တစ်နေ့ကုန် ထိုင်ကြည့်ခြင်းသည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းများ မလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သေစေနိုင်သော ရောဂါများကို ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာစွာ ထိုင်နေခြင်း သည် စောစီးစွာ သေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် နာတာရှည်ရောဂါများ ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အထိုင်များသော နေထိုင်မှုပုံစံသည် များစွာသော မကျန်းမာမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ- စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ နှလုံးနှင့် သွေးကြောရောဂါ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချို၊ ဒူလာရောဂါ နှင့် သွေးတိုးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သော နည်းလမ်းကို ရှာဖွေပါ။
အံ့သြသင့်စွာပင် မိဘများသည် ကလေးများအပေါ် အားကစားလုပ်ရန် အားပေးရာတွင် စံပြပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံ လွှမ်းမိုးမှု မရှိကြောင်း လေ့လာမှုများအရ တွေ့ရသည်။
သုတေသနပြုလုပ်သူများက အားကစားလုပ်ခြင်း အပြုအမှုသည် မိသားစု လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထက် တစ်ကိုယ်တော် လှုပ်ရှားမှုသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ သို့သော်လည်း သင့် ကလေးများကို လှုပ်ရှားမှု လုပ်စေသော နည်းလမ်းအချို့ ရှိပါသည်။
သင် သူတို့ဖြင့် ကစားပေးနိုင်သော အားကစားတစ်ခု ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ကလေးများသည် အစတွင် မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း ခံစားရနိုင်သည်။ သို့သော် အနည်းဆုံးတော့ သင်သည် သူတို့နှင့် အတွေ့အကြုံမျှဝေပြီး စောင့်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် သင်သည် အိမ်တွင် လေ့ကျင့်နိုင်သော လှုပ်ရှားမှုအချို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ- လက်ထောက်တွန်းတင် ခြင်း၊ ထိုင်ထပြုလုပ်ခြင်း။
သင့်ကလေးကို အားကစားလုပ်သော သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရှာပေးပါ။
နည်းလမ်းများကို ချိန်ညှိရန် သင့်ကလေးအား စောင့်ကြည့်နေပါ။ သူတို့ကို အားပေးပါ။
သင့်ကလေး၏ အစာဝေစုကို ပြန်လည်စီစဉ်ပါ။ မျှတအောင်ထားပြီး လိုအပ်ပါက လျှော့ချပါ။
သင့်ကလေး၏ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်သော အချိန်ကို လျော့ချပါ။
Don’t let your teenager beacouch potato! http://www.motherpedia.com.au/article/dont-let-your-teenager-be-a-couch-potato/ Accessed March 30, 2017
How Do You MotivateaCouch Potato Child? http://abcnews.go.com/GMA/AmericanFamily/story?id=125667/ Accessed March 30, 2017
90% of children ‘set to be couch potatoes’. https://www.theguardian.com/society/2005/may/29/schools.medicineandhealth/ Accessed March 30, 2017
ကြည့်သူမရှိဘဲ တီဗွီဖွင့်ထားခြင်းက သင့်ကလေး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကလေး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေတတ်အောင် ဘယ်လိုတွန်းအားပေး ကူညီမလဲ
ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ပျော်လည်းပျော်မယ်၊ ပိုလည်းတော်မယ့် လှုပ်ရှားမှုများ